Buddhism is definitely going to the dogs because of Bama Generals, 969 Ma Ba Tha, Aung Zay Yatu, Tharki Thwe etc | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘုရားပြီးရင်တော့ ငြမ်းဖျက်ပါလိမ့်မယ်..
ရဟန်းဆိုး ရဟန်းယုတ်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးခရိုနီတွေ သာသနာ့ဘောင်အတွင်းမှာ များပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးလေးတွေ ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်သက်ရောက်စေတဲ့ အန္တရာယ်က ပမွှားလေးသာဖြစ်ပါတယ် »
Buddhism is definitely going to the dogs because of Bama Generals, 969 Ma Ba Tha, Aung Zay Yatu, Tharki Thwe etc
Now START with me…ALL those supporting 969 Ma Ba Tha are Sit Khwe IDIOTS who are stupid that they are used by Military Generals to win over NLD in the coming GE 2015. And IF they ignorantly continue with ATROCITIES on Muslims…they would be pulled together with their political (military) masters to the ICC and punish with CRIMES AGAINST HUMANITY. They are sending their own race and religion to the dogs. That is Buddhism is definitely going to the dogs because of 969 Ma Ba Tha and Aung Zay Yatu, Tharki thwe etc
Definition of ….go to the dogs
ifacountry or an organization is going to the dogs, it is becoming less successful than it was in the past (usually in continuous tenses) They sat in the bar the night before the election, moaning that the country was going to the dogs.
Khitthit Kyawဟဟ တယ်လည်းစိတ်ဓာတ်အောက်တန်း ကြပါလားမွတ်စလင်တွေကသူတပါးကိုးကွယ်ရာကိုအသလွတ်မစော်
ကားဘူး အမေးရှိလို့အဖြေရှိတာပဲ ဖြစ်မယ်လူအများစုဆိုပြီးဝိုင်းကိုက် ခံရတာမွတ်စလင်တွေပါဘုန်းကြိး
တို့လူမျိုးတွေဘဲမုဒိန်းမူစာမျက်နာ အပြည့်ခုမှသူများပြော့ကွက်လိုက်ရှာမယ်လေးဘာလေးနဲ့ရှက်တတ်
Aung Tin>သူခိုးက လူဟစ်
The above are comments under the following STUPID posting>>>
အမျိုး ဘာသာ သာသနာနှင့် မီဒီယာ
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ်(၄၄)ပါ ဆောင်းပါးများနဲ့ပတ်သက်ပြီး
သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကစလို့ သမ္မတအထိအဆုံး အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များက
အရေးယူပေးပါရန်တိုင်စာများ ပေးပို့ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လိုက်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။
2014 အောက်တိုဘာ 27 ရက်နေ့က ၀န်ကြီးနှစ်ရောက်နဲ့တွေ့ပြီး ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းရပါတယ်။
သာသနာရေးညွန်မှူးတစ်ဦးနဲ့ မူပိုင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဌာနက ညွန်မှူးတစ်ဦးပါပါတယ်။
ဆွေးနွေးချိန် 29 မိနစ်ကျော်ကြာပါတယ်။ ရလာဒ်ကောင်းတယ်။ ပြင်စရာရှိတာ နည်းနည်းပြင်ပေးဖို့ ကတိပေးပြောကြားခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုပဲ 2014 အောက်တိုဘာ 28 ရက်နေ့မှာ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က
တိုင်ကြားမှုများရှိနေပါသဖြင့် လာရောက်တွေ့ဆုံပါရန်ဆိုတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ရရှိပါတယ်။
အောက်တိုဘာ 29 ရက်နေ့မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံရပြန်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချိန် မိနစ် 50 ကျော်ကြာပါတယ်။
စိုးရိမ်ဖွယ်ရလာဒ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေအောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ။
စာနယ်ဇင်းကောင်စီက လူကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတုန်း ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပြီးလုပ်နိုင်စရာရှိတာတွေကို သိလိုသမျှ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ညီရင်းကိုတမျှ ဖေးဖေးမမနဲ့ သိလိုသမျှကို ပြန်ဖြေကြားပေးတဲ့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက လူကြီးမင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြသနာရှိနေတာက ကျွန်တော်တို့ အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အောက်တန်းစားလုပ်ရပ်များ(ဥပမာ-ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်အတုကတစ်ဆင့်
၀ါဒအမှားတွေ ဖြန့်ချိနေတာ၊ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေနဲ့ အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ကို သပ်သျှိုသွေးခွဲနေတာ)အတွက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတစ်စုံတစ်ရာ ရှိမနေတာပါ။
Cyber Law မရှိသေးတဲ့အတွက် အဲဒါတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အခုချိန်ထိတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။(သြော် … ကိုယ်တွေကျတော့ ဖြေရှင်းရတာ မောလို့။ သူတို့ကျတော့လည်း
အမှောင်ထဲကနေဆိုတော့ ရဲချင်တိုင်းရဲ၊ ဆဲချင်တိုင်း ဆဲနဲ့ … ကောင်းပါရဲ့လေ)
အစကတော့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းရတာတွေကို
မမျှော်လင့်ခဲ့ရိုး အမှန်ပါ။ ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာလည်း အဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက် ကူညီဖေးမသူ၊ လမ်းညွှန်ပြသသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရတာပါပဲ။
ဆိုတော့ … ကျွန်တော်တို့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ သင်ခန်းစာ အကြီးကြီးရပါတယ်။
တရားဝင်ပုံနှိပ်မီဒီယာကနေ ကျွန်တော်က ပြောစရာရှိတာတွေ ပြောနေတယ်။ ဂျာနယ်ကလည်း သက်ဆိုင်ရာနေရာဒေသတွေကို အချိန်အကန့်အသတ်စောင်ရေအကန့်အသတ်နဲ့
ရောက်နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် … အဲဒီလိုလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဂျာနယ်ကို ဘာသာခြားတွေ၊ တည့်တည့်ပြောရရင် အစ္စလာမ်တွေက မျက်ခြေဖျက်မထားဘူး။ ပေါ့ပေါ့လေး သဘောမထားဘူး။
သတိဝီရိယနဲ့ တစ်လုံးဆိုတစ်လုံး၊ တစ်ပါဒဆို တစ်ပါဒ၊ တစ်ဝါကျဆို တစ်ဝါကျ၊ တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် လေ့လာ၊ မှတ်တမ်းတင်၊ အထိခိုက်မခံ တန်းပြီး ဆောင်ရွက်တယ်။
သူတို့တွေ သူတို့ ဘာသာကို ဘယ်လိုအလေးထားလဲဆိုတာ ဘယ်လောက် ပေါ်လွင်လှသလဲ။ သူတို့တွေ သူတို့ကို အထိမခံဘဲ ခြံစည်းရိုးကို ဘယ်လောက် လုံအောင်ကာသလဲ။
ဒီမေးခွန်းတွေ ရှိလာပါတယ်။ မှန်တာပြောရရင် ဒါ ကျွန်တော်တို့ ပြန်သင်ယူရမယ့် ကိစ္စပါ၊ ပြန်အတုယူရမယ့် ကိစ္စပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ သာသနာကို စော်ကားနေတဲ့ အရေးအသားတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုတ်ခတ်ဝေဖန်စော်ကားထားတဲ့အရေးအသားတွေဆိုတာ
မွန်းတည့်နေအုပ်စုက ရေးခဲ့သားခဲ့တုန်းက ဘယ်လောက်များခဲ့သလဲ။ ကျွန်တော်တို့က ပေါ့ပေါ့လေးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာလောကထဲမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်
ပေါ့ပေါ့လေးနေတယ်။ နာရကောင်းမှန်မသိ၊ တရားဝင်အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုရကောင်းမှန်းမသိ … မသိခြင်းအမှောင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာသာသနာ ဘယ်အထိ ထိုးဆင်းနေပြီလဲ။
ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာသာ သာသနာ အတွက် ၀င်နိုင်တဲ့ ခွေးတိုးပေါက်တွေအားလုံး၊ မလုံတဲ့စည်းရိုးတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ကာရမယ်။
မရှက်တမ်းဝန်ခံရရင် ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ပြန်အတုယူရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စော်ကားတဲ့အရေးအသားတစ်လုံးပါရင် တစ်လုံးအတွက်၊ တစ်ပါဒပါရင် တစ်ပါဒအတွက်
ကျွန်တော်တို့ တရားဥပဒေဘောင်ထဲကနေ အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်မယ်။ အရင်ရေးခဲ့တာတွေ အားလုံးကိုလည်း မဘသ(ဗဟို)မှာရှိတဲ့ သုတေသနနှင့် သမိုင်းမှတ်တမ်းဌာနက အချက်အလက်တွေကို
ထုတ်ယူပြီး ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြန်ပြီးပြင်ဆင်မယ်။ မော်လ၀ီနဲ့ယောဂီစာတမ်းက စလို့ … ခု လက်ရှိထွက်နေတဲ့ သတင်းစာ၊ စာစောင်တွေမှာ ပါတဲ့အရေးအသားတွေအထိ ကျွန်တော်တို့ လိုက်မယ်။
သူတို့တောင် လုပ်နေသေးတာ ကျွန်တော်တို့က ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။
ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆိုတော့ ဒီစာစုကိုဖတ်မိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများက ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားရေးသားထားတဲ့ စာစုများ၊ စာသားများ
ကို တွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် azytdhammajournal@gmail.com ကို လိပ်မူပြီး မိမိတွေ့ရှိတယ်ဂျာနယ်အမည်၊ အတွဲအမှတ်၊ ထုတ်ဝေရက်စွဲနဲ့ ပါဝင်ရေးသားထားတဲ့ စာမျက်မှာများ၊ အဲဒီစာမျက်နှာကို Scan ဖတ်လို့
ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးပို့ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြောကြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မဘသ(ဗဟို)၊ ရွာမအနောက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံ နိုင်ပါတယ်။
ပြောရရင် ဘာသာခြားတွေက ဓမ္မကထိကလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့သုံးနှုန်းနေတာတွေ၊ နောက် … ရဟန္တာလို့ သုံးနှုန်းနေတာတွေအထိ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်တဲ့ဘက်က
၀ိုင်းကူကြဖို့ပါပဲ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ အသင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အထိ ကြိုးစားမှာပါ။ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ပူးဆောင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့
gmail ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ဖို့ပါ။ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 09799851413,09799851415 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ … ကျွန်တော်တို့ကို တိုင်ကြားလို့ ပြန်လည်တိုင်ကြားရမယ်ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်လိုစိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တောင် နာတတ်သေးရင် ကျွန်တော်တို့က ပိုနာတတ်ရမပေါ့။
သူတို့တောင် ဒီလောက် လုပ်နိုင်သေးရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီထက်မက လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့။ သူတို့ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာကို ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တယ်ဆိုတာကို
သိဖို့နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကို စော်ကားနေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကြောင့်ပါ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့တည်ရမယ်။
This entry was posted on October 31, 2014 at 8:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Buddhism is definitely going to the dogs because of Bama Generals, 969 Ma Ba Tha, Aung Zay Yatu, Tharki Thwe etc”
October 31, 2014 at 10:06 am | Reply
.Only if the gov fail to take action..they would dare to continue writing Anti-Muslim Hate Speeches. Then only military gov hope to win some votes from NLD in GE 2015. Anyway they were INSTRUCTED to do these by the Government itself. So do not put hope on the gov to take action BUT just hope and pray that they and their military masters could all be pulled to ICC and punish inanear future.